आख्यानकार गगनसिंह थापाको छैठौं कृति `महाप्रलय´ बिमोचन - Jagaran Post
Jagaran Post ९ आश्विन २०७७, शुक्रबार १०:२१ कला साहित्य
काठमाण्डौ– आख्यानकार गगनसिंह थापाको छैठौ कृति महाप्रलयको आज बिमोचन भएको छ ।
प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति डा. गंगा प्रसाद उप्रेतीले साहित्यकार थापाको छैठौं कृति महाप्रलयको आज भर्चुअल बिमोचन गरे ।
महाप्रलयको भर्चुअल लोकार्पण गर्दै उप्रेतीले नेपाली आख्यान क्षेत्रमा महाप्रलय बिशिष्ट कृति भएको चर्चा गरे ।
आख्यानकार गगनसिंह थापाले महाप्रलयको रचनाका सन्दर्भमा अल्वर्ट आईन्सान्टाईनसंग एक पत्रकारले गरेको जिज्ञासाको प्रसंग सुनाए ।
आईन्सान्टाईनलाई एक पत्रकारले सोधे–महाप्रलय कसरी हुन्छ ? उनले जवाफ दिए, शक्ति राष्ट्रको अहमता र दम्भबाट । आख्यानकार थापाले भने, महाप्रलय तिनै मानवता र माया नभएका दम्भी र अहमता भएका शक्ति राष्ट्रको अहंकार र उन्मादबाट निम्तिएको परिणामको चित्रण हो ।
प्रज्ञा प्रतिष्ठानका सदस्य सचिव प्रा . डा. जगतप्रसाद उपाध्याय महाप्रलय उपन्यासलाई महा उपन्यास र महाआख्यानको संज्ञा दिए । उनले भने, यस कृतिले समेत बिराट जीवन लाई उपन्यास होईन, महा उपन्यास र महाआख्यान भन्न मन लाग्यो ।
उनले महाप्रलयमा हिमालय (जडान क्षेत्र) र पर्वतीय ( खसान क्षेत्र) समेटिएको कर्णालीको जडान र खसान सभ्यताको बीचको सम्बन्धका बिबिध पाटाहरुलाई पनि महाप्रलयले उजागर गरेको बताए ।
उहाँले जीवनको अधिकांश समय राजनीति र समाजसेवामा बिताउनु भयो । २०३६ सालमा सहलेखनमा पहिलो साहित्यिक कृृति प्रकाशन गरेको ३४ वर्षपछि उहाँको साहित्यमा पुनरागमन भयो, साहित्यकार शाहले भने, सायद उहाँलाई लाग्यो कि राजनीति मेरो क्षेत्र होईन ।
साहित्यकार थापाको सक्रियता, साहित्यप्रतिको लगावले उमेरले सृजनालाई छेक्न सक्दो रहनेछ भन्ने सन्देश दिएको छ, शाहले भने, जतिबेला म विद्यालयमा पढ्थे, त्यति बेला उहाँको सहलेखनमा साहित्यिक कृति सोर्ह्र सौगात प्रकाशित भईसकेको थियो । उहाँकै प्रेरणाले मलाई पनि साहित्यिक क्षेत्रमा लाग्न प्रेरित गर्यो ।
बिष्टले पुरै जीवन राजनीति र समाजसेवामा समर्पित गरेका आख्यानकार थापाले जीवनको उत्तरार्ध उत्कृष्ट साहित्य सृजना मार्फत समाजलाई पुनः गुन लगाएको बताए ।
सभा अध्यक्ष थापाले भर्चुअल लोकार्पण कार्यक्रममा सहयोग गर्ने र सहभागिता जनाउने सबैलाई धन्यवाद दिदै आख्यानकार पीताका थप दुई कृति प्रकाशोन्मुख रहेको जानकारी दिए ।
कोरोनाका कारण नयाँ शैलीमा भएको लोकार्पण समारोहका सभाअध्यक्ष थापा अफ्रिकाको नाईजेरियमा थिए । प्रमुख अतिथि, आख्यानकार थापा, कार्यक्रम सञ्चालक पौडेल र वक्ताहरु काठमाण्डौंमै थिए । त्यो पनि छु्टाछुट्टै स्थानमा ।